Nidaamka ku habboon Speed-dial
Polycarbonate ku jira
Muuqaal daabacan oo laga saari karo.
Awooda qaboojinta cajiibka ah
Nooca alaabta Koofiyad baaskiil
Lambarka Moodalka Koofiyadda Moutain ee VM203
Teknolojiyada EPS + PC-caaryada
Shahaadada CE EN1078 / CPSC1203
Muuqaalka hawo-mareenno xoog leh, rakibida madaxa raaxada, qaab-dhismeed hooseeya
Kordhi fursadaha APP loo habeeyay oo leh waxqabadka LED
Xarig Nylon khafiif ah
Faashad DACRON POLYESTER
Nidaamka ku habboon Nylon ST801 / POM / Wicitaan diirran
Haddii aad diyaar u tahay inaad kor u qaaddo ciyaartaada raacitaanka socodka, baaskiilka buurta adiga ayaa laguu sameeyay. Koofiyaddan aada-buurta oo dhan waxay leedahay isku-darka saxda ah ee walaxda iyo qaabka, oo leh hawo-hawo hawo leh iyo dabool dheer oo gadaal ah, koofiyaddan mountian-ka ah waxay kaa dhigeysaa mid qabow iyo kalsooni leh intaad ku dhexjirto caqabadaha teerain, iyo qaabkeeda dilaa ah - Nidaamka taam ahaanta loo yaqaan 'sppeedDial fit system', ka dhig xulasho weyn nay u-quudhin-waddo-la'aan. Sida maanta oo kale miisaanka culus, baaskiiladaha safarka ee safarka dheer ee soo jiidan kara faracyada laakiin sidoo kale fuulaya-koofiyaddan waxaa loo dhisay baashaal buuro oo dhan. Waxay ka kooban tahay kororka daboolka gadaal ee hoose ee ku habboon raacitaanka maalinta oo dhan.
Mid ka mid ah polycarbonate-ku-sameynta oo leh wiishash dhejis ah ayaa sameeya rafcaan aad u wanaagsan oo hawo-qaadashada hawo-qabadku waxay ka dhigeysaa mid qabow oo raaxo leh, oo ah qaab qaab-hooseeya oo aad u hooseeya oo loogu talagalay raacitaanka socodka maalinta oo dhan
Awoodda qaboojinta ee ka timaadda dhamaadka mesh mesh qabow waxay bixisaa oo keliya raaxada ku habboon laakiin sidoo kale qabow cajiib ah oo si dhakhso leh u qalalan inta lagu jiro fuulitaanka. In ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah ee horumarinta koofiyada iyo soo saarista, waxaan si macquul ah u adeegsanay noocyo badan oo maado dhar ah suufka, sida bakteeriyada, baasaboorka, TPU aan xuduud lahayn, silikoon iyo PC / PP qolof qoyan.
Khariidadda khafiifka ah ee leh 0.7mm si loo ilaaliyo koofiyad khafiif ah iyo suunka xajinta la xaqiijiyay iyo tijaabada duubista ee dhammaan heerarka hubinaya fuulista saftey. Waxaan sidoo kale bixinaa astaamo dhejis dheeri ah sida baahida macaamiisha oo leh milicsiga, maaddada waarta, dunta-dunta dunta leh iyo dunta dahabiga ah ee dunta leh.
Waxaan la midownay suumanka ITW iyo seddex-qufulka leh nidaamka xarkaha si loo adkeeyo nabadgelyada oo si fudud loogu isticmaalo hal gacan oo ka tagta gacanta kale oo bilaash ah si loo hubiyo amniga isticmaalaha Xarkaha Fidlock iyo Osmar ayaa loo heli karaa si loo habeeyo haddii ay u baahan yihiin nidaam dheeri ah oo dheeri ah oo loogu talagalay alaabadaada.
Nidaamka ku habboon ee dhakhsaha u habboon ayaa bixiya ta ugu raaxada badan, naqshadeynta hawo-qaadashada oo leh joomatari casri ah oo fududeysa farsamada, nidaamka ku habboon wuxuu ka kooban yahay suunka taam, jirka, pinon iyo dhoobada la xoqay, waxay ka dhigeysaa mid fudud oo lagu kalsoonaan karo saftey
Hore: Koofiyadda wadada VC301
Xiga: Koofiyad Baaskiil VM202
Koofiyad Baaskiil ugu Fiican
Koofiyadaha Baaskiil Cool
Koofiyadaha Baaskiilka Dhirta
Koofiyad Baaskiil Waddo
Koofiyadda wadada VC301
Koofiyadaha magaalada baaskiil VU102